Ukufunda: i-intanethi ngokwayo ingaba umlutha | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya Learning Izidakamizwa ze-intanethi
Uyamazi umuntu othola kunzima ukugxila kunoma yini enye ngaphandle kwe-intanethi? Ingabe bachitha isikhathi esiningi bebukela? Ingabe bayathukuthela lapho ezinye izindaba zibayisa kuzo?
One isazi sengqondo uthi ezungeze i-80% yentsha ayiphathayo ayinayo izimo zempilo yengqondo eyaziwa ngayo nokuthi izibonakaliso nezibonakaliso zazo zicacile kanjani ngemva kokuvala isikrini sesonto eli-3. Lezi zimo zihlanganisa ukucindezeleka, ADHD / ADD ukuziphatha nokuphazamiseka kwe-bipolar. Kuphela ngokususa ukusetshenziswa kwe-intanethi amasonto ambalwa ukubona ukuthi izimpawu zihlobene yini nomsebenzi wedwa kuphela umelaphi noma umhlinzeki wezempilo uyoqiniseka ukuthi isimo sempilo yengqondo singokoqobo. Ngisho noma isimo sesimo esifanayo, UDkt Dunckley uthi kuzokwenziwa kabi ngokusetshenziswa ngokweqile kwe-intanethi.
Ukulutha kwe-intanethi kuyinkinga. Ihambisana ngokukhula ukuhlukaniswa komphakathi kanye nokukhathazeka komphakathi. Ukucindezeleka nobuthakathaka bubi kakhulu ekuluthweni kwe-Inthanethi phakathi kwentsha.
Isivivinyo sesonto eli-3
UVictoria Dunckley omuhle kakhulu ibhuku, “Setha kabusha ubuchopho bengane yakho - uhlelo lwamasonto ama-4 lokuqeda ukuqothuka, ukukhulisa amabanga nokukhulisa amakhono ezenhlalo ngokuguqula imiphumela yesikhathi sesikrini se-elekthronikhi”Uhlelo oluvivinyiwe nabazali abalusebenzisayo ukusiza izingane zabo zingafundi imikhuba yazo ye-intanethi eluthayo. Yize engabhekani ngqo nokulutha kwe-inthanethi kwe-porn, isisekelo sobufakazi sifana kakhulu. Uhlelo luthatha amasonto amathathu, futhi ludinga isonto elilodwa lokulungiselela ukwenza isiqiniseko sokuthi luhamba kahle.
Ukulutha kwe-intanethi kuhlanganisa ukugembula, ukudlala kwevidiyo, imidiya yezenhlalo, izinhlelo zokusebenza zokuthandana, ukuthenga nezithombe zobulili ezingcolile.
Ukulutha kwezidakamizwa ezingcolile kuyi-Internet kungabangela ukwedlula ukwedlula imidlalo yokugembula noma imithombo yezokuxhumana njengoba kungabhubhisa isifiso sethu sobulili nesithando kubantu abangempela.
2015 ucwaningo ku-Neuroscience ye-Inthanethi ye-Pornography Umlutha: Ukubukeza nokuvuselela kuholela esiphethweni sokuthi "ukubheja kocansi e-Inthanethi kufanelana nesakhiwo somlutha futhi uhlanganyela ngezindlela ezifanayo eziyisisekelo nokulutha ngokweqile."
Izimpawu zokusebenzisa i-porno ngokweqile ngokuvamile zilingisa lezo ezinye izifo. Ukuze uhlukanise izimo zangempela ezivela ezithombeni ezingcolile, indlela engcono kakhulu ukuqala nge-porn fast. Uma ubuchopho besengasakhukhumezi, kunethuba lokubuyisela ukuzwela kwemvelo.
I-Science of Addiction Internet
Kule vidiyo i-blogger ethi "Engikufundile" inikeza ukuvakasha okucwaningwe kahle kwezinqubo ezithile zobuchopho ezenza i-inthanethi (nezinto kanye nokuziphatha) kube umlutha. Inhloso yabo ukusiza ababukeli baqonde ukuthi i-Intanethi ibuthinta kanjani ubuchopho bakho ukuze ungaqali ukulawulwa yiyo (17.01).